ဂျပန်နိုင်ငံမှ COVID-19 လူနာများကို စမ်းသပ်ကုသရန် တုပ်ကွေးကုသဆေး Avigan ကို မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၃၈ နိုင်ငံသို့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမည် ~ Myanmar Online News
ဂျပန်နိုင်ငံမှ COVID-19 လူနာများကို စမ်းသပ်ကုသရန် တုပ်ကွေးကုသဆေး Avigan ကို မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၃၈ နိုင်ငံသို့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမည်
11:12 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
ဂပြနျနိုငျငံတှငျ တုပျကှေးရောဂါကုသရာ၌ အသုံးပွုနသေညျ့ Avigan ဆေးကို Covid-19 လူနာမြားတှငျ စမျးသပျကုသနိုငျရေးအတှကျ ကမ႓ာ့နိုငျငံပေါငျး ၃၈ နိုငျငံသို့ ယခုသီတငျးပတျအတှငျး အခမဲ့ပို့ဆောငျပေးရနျ စီစဉျထားပွီး ဖွစျကွောငျး သိရသညျ။
Avigan ဆေးကို ဂျပန်အစိုးရမှပို့ဆောင်ပေးမည့်နိုင်ငံ များထဲတွင် အရှှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများထဲမှ မြန်မာ အပါအဝင် ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှား ၄နိုင်ငံလည်း ပါဝင်နေသည်ဟု မလေးရှားမီဒီယာများ၏ဖော်ပြမှုအရ သိရှိရသည်။
ဂျပန်သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သည့် ကျိုဒိုမီဒီယာကဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ကိုးကား၍ဖော်ပြထားမှုအရ ဂျပန်မှပို့ဆောင်မည့် ၃၈နိုင်ငံတွင်ဥရောပမှ ၂၅ နိုင်ငံ ပါဝင်သည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါဥရောပ ၂၅ နိုင်ငံအနက်အများစုမှာ ဥရောပတိုက်အရှေ့ဘက် ပိုင်းမှ နိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ ထို့အတူ ကူဝိတ်အပါအဝင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှ ၅ နိုင်ငံလည်း ပါဝင်နေသည်ဟု သိရသည်။
Favipiravir ဟုလည်း သိရှိကြသည့်အဆိုပါ Avigan ဆေးကို Covid-19 လူနာများတွင် စမ်းသပ်ကုသနိုင်ရေးအတွက် အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးရန်စီစဉ်ထားသည် ဟုလည်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Toshimitsu Motegi တိုရှီမိဆုမိုတီဂီက ပြောကြားသည်။
"ဒီဆေးက Covid-19 လူနာတွေကို ကုသရာမှာ ထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာ အပျော့စားကို ခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေပေါ့" ဟုလည်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတိုရှီမိဆုမိုတီဂီက ဆိုသည်။
Avigan ဆေးကို လက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံများတွင် Covid-19 လူနာများကိုကုသရာ၌ မည်မျှထိရောက်ပြီးအစွမ်းရှိသည်ဆိုသည့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်များရရှိရန်အတွက် ဆေးလက်ခံရရှိမည့် ၃၈ နိုင်ငံနှင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဟု တိုရှီမိဆုမိုတီဂီက ပြောသည်။
Avigan ဆေးကို Fujifilm Group လက်အောက်ခံToyama Chemical မှ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက ဆေးကုသမှုအတွက် အတည်ပြု မှု ရရှိခဲ့သည်။ Fujifilm လိုင်စင် ရရှိထားသည့် Avigan ဆေးတွင်ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ API (Active Pharmaceutical Ingredient)နှင့်ပတ်သက်သည့် ဖော်မြူလာကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ Zhejiang Hisun ဆေးဝါးကုမ္ပဏီသို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အတွင်းက ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
Avigan ဆေးမှာ Covid-19 လူနာများကို ကုသရာတွင် ထိရောက်သည့်ဆေးဝါးဖြစ်သည်ဟုလည်း ယခု ၂၀၂၀ မတ်လအတွင်းက တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စမ်းသပ်မှုများအပြီးတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။Covid-19 လူနာများကို ကုသရာတွင် Avigan အား ကုသဆေးများအနက်မှတစ်မျိုးအဖြစ် တရားဝင် သတ် မှတ်ရန် တရုတ်အာဏာပိုင်များက စီစဉ်ထားပြီးဖြစ် သည်ဟုလည်း ကျိုဒိုသတင်းမီဒီယာက ဖော်ပြသည်။
သို့သော် Avigan တွင်လည်း အားနည်းချက်များရှိနေပြီး ကနဦးလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် ထိခိုက်မှုအချို ့ရှိကာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကို ပေးရန်မသင့်တော်သည့် ဆေးဝါးဖြစ်သည်ဟုလည်း ကျိုဒိုသတင်းမီဒီယာက ဖော် ပြထားသည်။
သို့သောျ Avigan ဆေးကို ဂပြနျမှ အခမဲ့ပို့ဆောငျပေးမညျ့ ၃၈ နိုငျငံအပါအဝငျ ကမ႓ာ့နိုငျငံစုစုပေါငျး ၇၀ က တောငျးဆိုထားကွသညျဟု ဂပြနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး တိုရှီမိဆုမိုတီဂီက ပွောကွားခဲ့သလို Aviganဆေးကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ပေးရန် Fujifilm Group ကို ဂျပန် အစိုးရက တိုက်တွန်းထားသည်ဟု သိရသည်။
Avigan ဆေးကို လိုအပျနသေညျ့ အခွားနိုငျငံမြားအတှကျ ဝယျယူဖွနျ့ဖွူ းပေးနိုငျရနျအတှကျလညျး ကမ႓ာ့ကုလသမဂ်ဂ(UN)သို့ဂပြနျအစိုးရက အမရေိကနျဒေါျလာ ၁ သနျး ပေးသှားမညျဖွစျကွောငျးလညျး သိရှိရသညျ။
Source : The Star, Kyodo News
Ref : The Ladies News
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တုပ်ကွေးရောဂါကုသရာ၌ အသုံးပြုနေသည့် Avigan ဆေးကို Covid-19 လူနာများတွင် စမ်းသပ်ကုသနိုင်ရေးအတွက် ကမ႓ာ့နိုင်ငံပေါင်း ၃၈ နိုင်ငံသို့ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးရန် စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် Avigan တွင်လည်း အားနည်းချက်များရှိနေပြီး ကနဦးလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် ထိခိုက်မှုအချို့ရှိကာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကို ပေးရန်မသင့်တော်သည့် ဆေးဝါးဖြစ်သည်ဟုလည်း ကျိုဒိုသတင်းမီဒီယာက ဖော် ပြထားသည်။
သို့သော် Avigan ဆေးကို ဂျပန်မှ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမည့် ၃၈ နိုင်ငံအပါအဝင် ကမ႓ာ့နိုင်ငံစုစုပေါင်း ၇၀ က တောင်းဆိုထားကြသည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုရှီမိဆုမိုတီဂီက ပြောကြားခဲ့သလို Avigan ဆေးကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ပေးရန် Fujifilm Group ကို ဂျပန် အစိုးရက တိုက်တွန်းထားသည်ဟု သိရသည်။
Avigan ဆေးကို လိုအပ်နေသည့် အခြားနိုင်ငံများအတွက် ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူ းပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်း ကမ႓ာ့ကုလသမဂ္ဂ(UN)သို့ဂျပန်အစိုးရက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
အင်ချွန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာအပ...
လွှတ်တော်လေ့လာရေး လာရောက်ခွင့်အား ခေတ္တရပ်နားထားကြ...
ASEAN နိုင်ငံများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှု အခြေအန...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေး၏ တာဝန်ရှိသူများသ...
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင...
လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်အား စစ်ဆေးရန်ရှိသော်လည်း တရားရုံ...
ကလေးများတွင်တွေ့ရသော COVID-19 ရောဂါ၏ဆိုးကျိုးသည် က...
နေတိုးအုပ်စုရဟတ်ယာဉ် ဂရိနိုင်ငံအနီးရေပြင်တွင် ပျက်...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးများတွင် ရွပ်ရ...
မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ထိုင်...
တပ်မတော်၏ နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့ရှိ စစ်က...
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် Covid-19 Fund မှ ကျပ်သိန်...
COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ၏ အ...
ဂျပန်နိုင်ငံမှ COVID-19 လူနာများကို စမ်းသပ်ကုသရန် ...
မြောက်ဥက္ကလာမှ လက်နှက်များ စုဆောင်းသူကို ဖမ်းဆီးရမိ
ပါကစ္စတန်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၄၈၀ ခန့် COVID-19ရ...
Relief Flight ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခ...
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်...
သောက်သုံးရေ ရှားပါးလျက်ရှိသည့်ဒေသများသို့ သောက်သုံ...
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၌ လက်နက်/ခဲယမ်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မင...
ယနေ့ နံနက် (၇:၀၀)နာရီထုတ်ပြန်ချက်တွင် COVID-19 ရော...
ရေးမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် (၃၇)မိုင် ခန့်အကွာကို ဗဟိ...
Remdesivir ဆေးသည် Trial များတွင် ရလဒ်ကောင်း ရရှိပြ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင်Covid-19 အတည်ပြုလူနာ (၁၅၀)ဦးအထိရှ...
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပါမောက္ခ ဆရာ...
Covid-19 အတည်ပြုလူနာအမှတ် ၁၄၄ နှင့် စက်ရုံတွင်း ထိ...
အမျိုးသားကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဟာ ပရဟိတကော်မတီသည် ဒေ...
ဧပြီလ(၂၈) ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီအချိန်အထိ COVID-19 ရ...
ထန်းတပင်မြို့နယ် စံကင်းကြီးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျ...
တာချီလိတ်တွင် RCSS ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသူ လက်နက်ကိုင်မ...
စင်ကာပူတွင် ယနေ့ Covid-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါ (၅၂...
သြစတေးလျနိုင်ငံ ဘွန်ဒီကမ်းခြေအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရ...
ဥရောပသမဂ္ဂမှ အာဆီယံဒေသတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ...
AA Medical Products ကုမ္ပဏီက လှူဒါန်းထားသော စက်သစ်...
တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့တော်တွင် စာသင်ကျောင်းမ...
Covid-19 ကြောင့် သွားလာမှု ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ပြ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် စစ်ကိုင်းတိုင...
COVID-19 ကို ခြေရာခံတဲ့ App ထိုင်းမှာ စမ်းသပ် အသုံ...
မန္တလေး ကန်တော်နဒီဆေးရုံ၏ လိုအပ်ချက်များကို Covid-...
COVID-19) ရောဂါကာလကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ မှုခင်းကျူးလ...
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာနိ...
covid-19 ကြောင့် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ်အတွင်...
ကိုဗစ်ရောဂါရှာဖွေရေးစက် COBAS 6800 များသည် တပ်မတော...
စျေးချိုတော်ရှိ ဆေးဝါးနှင့် အစားအသောက်ရောင်းချသည့်...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုတည်ရှိရာ Cox's Ba...
COVID-19 ပြီးဆုံးရန်ဝေးသေးကြောင်း WHO ပြော၊ ကလေးတွ...
Covid-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလ စက်ရုံတွေကို ...
ဗီယက်နမ်၌ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါမှ ပြန်လည်ကျန်းမာလာသ...
ဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနှုန်း ၊ အပ်ငွေများအပေါ် ပေးသည့် အတိ...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ မုတ်သုံ မေ ၁၆ ရက်မှ ၂၁ ရက်အတွင်း...
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန် ကျန်းမာလျက်ရ...
ပလက်ဝမြို့ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ...
COVID-19 အတည်ပြုလူနာ အမှတ် ၁၄၄ နှင့် ပတ်သက်၍ KNC မ...
မြောက်ဦးမြို့ရှိ နယ်မြေခံရဲတပ်ရင်း၌ တာဝန် ထမ်းဆောင...
ထပ်တိုးအတည်ပြုလူနာအသစ်မရှိတဲ့ COVID-19 ရောဂါစောင့်...
တပ်မတော်က လှူဒါန်းသော COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချု...
COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင...
မြန်မာနိုင်ငံတွင်Covid-19 အတည်ပြုလူနာ (၁၄၆)ဦးအထိရှ...
Covid-19 လူနာအမှတ်စဉ်-၁၄၅ ကို တိုင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ...
မင်းရာဇာအမှုမှ အိမ်အကူမိန်းကလေး ဆေးရုံမှဆင်း
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဟီရတ်မြို့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ...
PEP နို့မှုန့် Company ကို Lockdown ချ
ဆရာတော်ရှင်ဆေကိန္ဒမှ ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀ ) စောင့်ရှောက...
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားမှုကို ထိရောက်...
Cobas စက်၂ လုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတစ်ဦး၏ သုံးသပ်...
အမျိုးသားအဆင့် စေတနာဝန်ထမ်းဦးဆောင်အဖွဲ့ အား နိုင်င...
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းခ...
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံမှာ COVID-19 လူနာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အ...
ပြည်ပရောက်မြန်မာများကို အထူးလေယာဉ်များဖြင့် ပြန်ခေ...
ထိုင်းစစ်တပ်က အမေရိကန်ထံမှ Stryker တင့်ကား အစီး ၅၀...
ရေစကြို-ပခုက္ကူ ကားလမ်ဘေးမှ သစ်ပင်ကြီးများပြိုလဲခဲ...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တားဆီးရေးမှာ မြန်မာကို ကူညီမယ်...
ဗီယက်နမ်တွင် ရက်အတန်ကြာသည်အထိ COVID-19 အသစ်ကူးစက်သ...
မြန်မာ ၃၃ ဦးကို တောင်ကိုရီးယား ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးဖို့ ...
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရသ...
COVID-19 ကူးစက်ခံနေရသူများအား ပိုးသတ်ဆေးထိုးရန် သမ...
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများ ဆက်...
COVID-19 အတည်ပြုလူနာ (၂) ဦးထပ်မံတွေ့ရှိသောကြောင့် ...
COVID -19 ကာလအတွင်း တောင်ကြီးမြို့ရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်...
COVID-19 ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ (၁၀)ဦး ရှိလာပြီး ယနေ...
COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြိ...